Ndirikunzwa kuda murume anondisvira zviri hard and asingakurumidze kutunda! - Masasi eHarare
DzeBonde Ndirikunzwa kuda murume anondisvira zviri hard and asingakurumidze kutunda!
Ndirikunzwa kuda murume anondisvira zviri hard and asingakurumidze kutunda!
2Ndaida kuti anditundire pamuviri wangu wese kuti ndiite hurume hwekutora ndichinanzva.
Ndadzoka kumba apa ndainge ndichibva kuwork enjoying hangu holiday but zemo ndiro rainge rakandirova, ndirikunzwa kuda murume anondisvira zviri hard and asingakurumidze kutunda. Ndakati tichibva kubasa zvikanzi nemumwe mukomana wandaishanda naye handei ku Newscafe tinonwa one or two ndikati why not! Ndakafara sei paakandiudza kuti tainosangana nemumwe mukomana aishanda pasame building nesu apa ndaimufarora zvisingaite, takatenga madrinks at the Bar ndokubva tawana katable kataizokwana tese neshamwari yake. After about fifteen minutes Brian akafonera shamwari yake zvikanzi ndosvika in a few minutes, ndakaita big surprise ndichiwona chino chimonya chaisimudza ruoko to get Brian’s attention “How are you doing man”, Brian akabva ayita introduction achiti uyu anonzi Maxwell. Ndainge ndakutonzwa beche rangu kutota kare.
Maxwell ane charm masasi aitaura naBrian apa achizama kundiisa muconversation yacho, akazonditarisa akaditi “What do you do” ndikati I am in media aaah takatanga kutoita kunge takazivana kare nekuti iye ayinge ari journalist . After some time Brian akati ndakuyenda nekuti ainge ane zvakawanda the next day saka ayida kunge ane a clear head. Max akabvunza kuti ndirikuda imwe drink her ndikati ehe then Brian waved goodbye, ndokubva ndasara naMax ainge akanaka mhani apa mhasuru dzake dzaiyita kuti beche rangu ritambe tambe kuita kunyerekedzwa. Max akauya akagara padhuze pangu apa he was a single guy ainge ari in his mid thirties apa ainge asati aroora because basa rake kept him busy zvekuti aishaya munhu wekudana nekuti vanhu vese vaaidanana navo vaimusiya because of basa rake. Ndakamuudza about marriage yangu yainge yakapera and about holiday yangu yandainge ndakamboita rimwe gore ndayenda ku Las Vegas.
Max akanditi handei ku dinner ndikati it’s fine ndokubva andiyendesa kune this Italian restaurant yainge iri around the corner. The food was nice, ndipo paakandibvunza kuti ndinogara kupi as he wanted kundiperekedza kumba ini ndaigoti chii nhai masasi ndainge ndakatomuteya nekuti zvaiyita beche rangu rainge ratononokerwa. Takapinda mu Uber ndokuyenda kumba tasvika ndokubva ndamuti please come in, handiite waste any time. Max aigona kukisa and kubatabata mukadzi, after first kiss takabva tayenda kubedroom straight ndokubva ndasviko pfugama ndokutanga kuyamwa mboro yake pandikaiburitsa mubhurugwa ndakazviudza kuti haaa I am not going to be disappointed murume ainge akatakura mboro mhani. Max akatanga kuchemerera pandainanzva mboro yake ndokubva anditi ndinanzve slowly.
Max akandibvisa top yangu ndokutanga kutambisa mazamu apa inini ndichitambisa machende ndichinanzva zimboro rake, uyu ndiye type yemurume yandinoda manje haaa mboro ihombe mhani iyoyo. Ndakambomira ndokubva tese tabvisa hembe apa ndichibata mhasuru dzake ndichiyamwa minyatso yake, we both smiled and laughed apa tichikisana ndichibata pese pese. Akarara pamusoro pangu ndokubva ayita missionary chaiyo ndikafunga kuti akurumidza asi haana kuita disappoint as he put zimboro rake mubeche rangu achibva anditi nhasi ndirikukusvira kusvikira kuseni, ndikati horaiti please ndisvirirewo kani iye achibva ayita saizvozvo achikoira nice and slow. Ndakatanga kuti please ndisvirewo zvakanaka zvikanzi babe handisati ndambowana complaint pavanhu vese vandikasvira. Paakasvira ndipo pandikaziva kuti zveshuwa hapana mukadzi angaite complain nekusvirwa kwandaiyita.
Max akapomba beche rangu slow and hard ndikatanga kunzwa a massive 0gasm ichiwungana mukati mebeche apa mboro yake ichikwizirira pamatinji angu. Ndakatanga kuchemerera ndichinzwa muviri wangu wese uchiita shake ndokubva ndatunda ipapo, Max ainge asati atunda and ndaida to please him. Ndakatanga kubonyora mboro yake ndichiiyamwa kusvika pahuro chaipo ndikanzwa achichemerera ndokuti haaa unogona kuyamwa mboro mhani and we both smiled. Ndakayamwa nekunanzva zimboro rake ndichinzwa kuti akazara hurume and ndaida kuti atundire all over muviri wangu kuti nditange kutora maspemu ake ndiadye. Ndakamuti please tundira huronyo hwako pandiri ndikawona munhu ayita kumira pamusoro pangu ndokuita kuzadza face nemazamu angu nemaspemu ake, ndichibva ndatanga kumamedza.
Ndirikunzwa kuda murume anondisvira